Warshadaha Shiinaha Lumber Warp / Hood iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
ShiningPlast PP / PE oo looxyo kuxiran / gogosha ayaa siinaysa difaacida biyaha, adkeysiga, iyo ilaalinta cimrigaaga / qoryahaaga cimilada adag iyo hareeraha ha ahaato wareejinta ama kaydinta ama baakadeynta.
Qoryaha loo yaqaan 'ShiningPlast PP / PE' oo looxyo alwaax ah / gogo 'loo adeegsaday xirmooyin ka ilaalin kara alwaax, xaashiis, alwaax la qalajiyey, alwaax la daweeyey, alwaax dib loo hagaajiyay, alwaaxyo & guluubyo, darbiyada qaab dhismeedka, dhammaan noocyada dhinacyada iyo qalabka kale ee dhismaha.
ShiningPlast PP / PE oo looxaanta alwaax alwaaxda ah lagu dhejin karaa ayaa laga soo saari karaa illaa 4 midab oo ka caawinaya in la muujiyo tayada alwaaxdaada.
Sidoo kale Labada-Midab Caddaan ee dibedda ah ayaa dusha sare ka dhigaysa mid milicsata, dib-u-madowuna waxay u yeeshaa hooska hadhka alwaaxda, sidaa darteed waxay ku siin kartaa badbaado muddo dheer xirmadaha baakadahaaga. Intaa waxaa dheer oo loogu talagalay daweynta UV loo daweeyey, ShiningPlast laambarka dhuuxa / hood ayaa sii dheeraanaya.
· Cimilada u adkaysata:
.SBPP la joojiyay:
Xaraashka SBPP ayaa la heli karaa si looga helo shuruudaha antiskid dusha sare.
Hore: Bixin La'aan
Xiga: 3-Ply House Wrap